Umfanekiso ngoFebruwari, wama-23 kwintcintiswano esikolweni kunye nesifundo senqanaba lesibini ngepencil kunye neepende, sihamba kunye neefoto nezinyathelo zezinyathelo kunye nevidiyo
Umfanekiso wezingane ngoFebruwari 23-isipho esihle kunazo zonke kubabawo, umkhulu okanye umzalwana osuka kumntwana. Umzekeliso obalaseleyo, odwetshwe ipencilisi okanye iipende, uya kumnandipha umntu kwisiganeko kunye nokufudumala izandla zezingane ixesha elide. Xa ulungiselela isitebhisi ngamanyathelo enkundleni okanye inxaxheba kumncintiswano esikolweni, kukufanelekile ukucinga ngokucokisekileyo malunga nesiqhinga. Ukudala kungekhona nje inqaku elihle elenziwe ngesandla, kodwa uphawu lwangempela "lokukhusela intsapho encinci kunye ne-Fatherland yonke".
Isicwangciso esiphezulu somfanekiso ngoFebhuwari 23 sinokuthi:
izixhobo zemikhosi kunye nayo yonke into ejongene nayo - itanki, iinqanawa, iinqwelo, iimoto, i-submarines, iinqwelo;
abantu bomthonyama-utata okanye uyise kumfaniswano wezempi;
Izinto ezincinane zokufuzisela - iinkwenkwezi, iidibhoni, iintyatyambo, imisebe yelanga, njl.;
Iiklasi zendoda - nabani na umntu ojongayo ibhola, ukulungisa imoto, ukwakha indlu;
Musa ukulibala malunga nemibhalo yokubulisa. Kulo mfanekiso unakho ukubhala ngokukhawuleza amagama athi "Ukhuseli Ovuyokileyo woSuku lwabazali", "Ukususela ngoFebruwari 23", "Uvuyo lweholide!", "Ndiyakuvuyela!".
Indlela yokuthoba ngokukhawuleza umzobo wepensile ngoFebruwari 23 kwi-nursergarten
Kwiminyaka yakutshanje, ukukhetha umxholo wokudweba ngoFebruwari 23 kunzima kakhulu. Iingcamango zamandulo kunye nezithethe zenza ukungabikho, kwaye abatsha banganyanga ukubonakala. Kulungile, ukhetho olulula kunye nolungelungileyo kukukhumbuza uphawu lwesizwe lokunqoba kwaye ulubonise ngombala kwikhadi leeholide. Isinyathelo-nge-nyathelo ukudweba neTrans George ibhondi, inkwenkwezi kunye nenkulumkiso yentlanzi iya kuhlala ibukeka ilungileyo njengesipho sokunyanisekileyo sabantwana kumkhuseli we-Fatherland.
Izinto eziyimfuneko zomfanekiso ngomhla we-Defender of Fatherland kwi-kindergarten
Iphepha lephepha elimhlophe
Yenza ipensele ebukhali
Imibala yeepencil okanye iipende
Imiyalelo malunga nendlela yokudweba umdwebo wepensile kwi-kindergarten ngoFebruwari 23
Beka iphepha lephepha elimhlophe elisezantsi kwindawo yomsebenzi. Kwinqanaba eliphambili uthabatha isangqa, usebenzisa ikhampasi yokubhala. Hlukanisa ubume kwi-4 elinganayo.
Ukusebenzisa i-protractor, faka "imisebe" kwisangqa ukuze isahlulo sihlulwe ukusuka kwinqanaba ukuya kwiindawo ezilinganayo. Isiqalo ngasinye sesibini "sahlukanisa ngumqondiso kwisiqingatha.
Ukugxila kwinqanaba elincinane ngeyiteyimu, bhala inkwenkwezi elinezihlanu ezinemizila ejikeleziweyo. Gweba yonke imigca ngaphandle kweenkwenkwezi uze udwebe enye intambo, uphinde uhambe kwi-0.5-1 cm ukusuka kumgca ophezulu.
Qala ukudweba i-ribbon yaseSt. George. Qala kunye nekhoyili ephambili emboza inxalenye yeenkwenkwezi.
Dweba iiphene zeSt. George ngaphesheya kwinqanaba eliphambili. Vumela amacandelwana ahambe kancane.
Kulo lonke i-ribbon udweba imivimbo emnyama emifana emide.
Ukuhambisa yonke imigca, gwala umgca ocacileyo weenkwenkwezi, ususe konke okungeyomfuneko. Kwinqanaba elingaphantsi kwiphepha, faka nayiphi na into ebhaliweyo. Ngokomzekelo, "Umloli ovuyokileyo woSuku lwabazali".
Ukusebenzisa iipencilisi zombala, i-watercolor okanye i-gouache imibala, upende umfanekiso. Lindela de kube umzobo uphelele, uze uthathe kwi-kindergarten ngoFebruwari 23.
Ukwenza ipencilwana ngoFebruwari 23 kubantwana kwizigaba, iklasi yeklasi kunye nesithombe
Usuku lwe-Fatherland Defender, olugubha minyaka yonke ngoFebruwari 23, luqhuba i-prehistory yayo emva kwebusika ebusika ngo-1918-imfazwe enamandla kufuphi nePoskov neNara. Ngelo xesha elide amajoni eLizwe lamaSoviet awanqabisa ngokufanelekileyo ukuhlaselwa kwamaJamani. Amadoda amancinci, amadoda kunye noomkhulu bawavikela ilizwe lawo ngelixabiso lokuphila kwabo. Khumbula oku, udwebe umzobo wepensile ngesinyathelo se-23 kuFebhuwari. Yenza imifanekiso yakho ebalabala ibe yisipho sokufudumala nesimo sengqondo seeholide kwiindawo ezikhuselekileyo zaseRussia.
Izinto eziyimfuneko zokudweba abantwana ngoFebruwari 23
Iphepha le-A5 yamaphepha amhlophe
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kubantwana ukudala umfanekiso woSuku lwe-Fatherland Defender kwipensile
Beka iphepha elisezantsi kwaye ucacise umgca womzobo ozayo. Kancinane kwinqanaba lokucinga, udwebe umgca othe ngqo. Kuya kufumaneka kwicala lasekhohlo, ukuba ukhangele ngqo. Ngomgca, phawula i-oval yekhanda lomkhosi kunye nesigqibo esifanelekileyo samagxa kunye neengalo.
Qalisa ukucacisa umkhosi. Yenza ubuso ngokuchaza i-cheekbones, isitya senwele, iindlebe, intamo eqinile, i-fur collar kunye namahlombe amakhulu.
Inkcukacha ngobuso ngokudweba zonke iimpawu. Kwi-lapel ye-cap yongeza ukukhutshwa, kunye nekhola ye-shirt - amancinci amancinci. Dweba isoldti yesandla ukwenzela ukuba angabamba umshini wompu.
Kule nqanaba, jonga umgca womshini omkhulu ezandleni zeqhawe. Kwikhati, faka iifowuni ezinkulu.
Dweba zonke iinkcukacha zesixhobo. Imigca kufuneka ibe yincinci, yicacile.
Kwimpahla yesoldati, bonisa umzekelo wenkampu - umbala wangempela emkhosini wethu. Emva kweqhawe, udwebe imigca yeBhanner yemfazwe.
Qhubekisa kwingcaciso yeBanner ngemigca eyongeziweyo. Ngakwesokunene kwiphepha (kwicandelo phakathi kwentloko yejoni kunye nompu womshini), bhala umbhalo othi "Usikhuseli Ovuyokileyo woSuku lwabazali".
Yenza umbala umzekeliso ngeepensele kwimbala eqaqambileyo eneempahla - kwaye uya kuba neyinyathelo elifanelekileyo ngokunyathela abantwana ngoFebruwari wama-23.
Ukudweba imibala kumxholo ngoFebruwari 23 ukwenzela ukhuphiswano esikolweni, kwiklasi yeklasi eneefoto ezisezantsi
Izikolo zeeRashiya zihlela imibukiso yembeko kunye nemincintiswano, iphelelwe ngoFebhuwari 23 kwaye izinikezelwe kubalindi bamadoda: ootata, oomkhulu, oomama kunye nabazalwana. Imiboniso ethandwa kakhulu kwimincintiswano efanayo yesikolo imidwebo eneepende kunye neepensile. Bavumela abantwana ukuba babonise umbono wabo weeholide kwaye babonise ukubonga kwabagwenxa. Ukuba ufuna kwakhona ukudweba umzobo kunye neepende zokhuphiswano lwesikolo ngokuhlonipha ngoFebruwari 23, sebenzisa umyalelo wethu wesinyathelo ngeyinyathelo.
Izinto eziyimfuneko zokudweba ukhuphiswano ngenhlonipho kaFebruwari 23 esikolweni
Iphepha lephepha elimhlophe le-A4
Iibhontshisi kunye neepayipi zegouache
Umzobo ngee-inks zesigaba somncintiswano wesikolo ngo-Febhuwari 23
Qala ukwakhiwa itanki kwiikhabhi zeesabhile kunye namacangca. Musa ucinezela ipenciloni ukwenzela ukuba xa imigca encedisayo ichithwa, iphepha aliyonakaliswa.
Nciphisa umxube we-oblong ibe yimbumba kunye nomzimba. Yongeza isibhamu setanki.
Kulo dice eliphezulu udweba inqaba. Inkcazelo engaphantsi kwimbumba kunye ne-hull.
Qaphela ngokucwangcisiweyo onke amasondo eembumba.
Dweba iinkcukacha zamasondo kunye nomdwebo wemvelaphi.
Thatha i-eraser kwaye ufeze ngokukhawuleza yonke imigca encedisayo.
Kwipalali, nciphisa ipeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomncinci wamanzi uze upende phezu kwezulu. Yenza okufanayo kunye nopende obomvu womhlaba phantsi kwetanki. Lindela kude kube nepeyinti ekudwebeni.
Ipeyinti eluhlaza yeMars iyanciphisa kwaye upende phezu kwetanki. Yongeza umthunzi omncinane wesaladi kwiingca eziluhlaza.
Ipeyinti eluhlaza obumnyama igqithisa ukungena kwiitanki.
Ngombala omdaka-umdaka, udwebe isibindi, faka i-shades ebomvu ukuya phezulu.
Ukupenda kwipende eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza oluhlaza Ukusebenzisa ibrashi emncinci, sebenzisa umbala obangelwayo kunye nokunyakaza okuthe ngqo kwindawo yehlathi, ukukhanya kunye nengca.
Ukusebenzisa upende obomvu, thabatha isithunzi kwi-tank kunye nesithuba phakathi kwevili kunye nesibindi. Ungakulibala ukuzisa uhlaza olugciniweyo olumgcini lwengca ebusweni.
Ukusebenzisa ibrashi elincinci kunye nepeyinti emnyama, inkcazelo yombumba kunye namavili.
Bumnyama umtya weetanki kunye nazo zonke izidumbu emzimbeni. Inkqubo kufuneka ibe yinkcazo njengoko kunokwenzeka.
Ukugqiba imvelaphi uze umise umfanekiso. Ukudweba imibala kumxholo othi "uFebhuwari 23" ukukhuphisana esikolweni ukulungele!
Usuku loMkhuseli we-Fatherland yiholide enkulu, uvumele kwakhona ukubonga amadoda, amakhwenkwe namakhwenkwe ngenxa yesibindi, isibindi nesibindi. Kwaye abo bazange bakhonze emkhosini bafanelwe ukuvuyisana, kuba bayazikhusela nokukhusela amakhaya kunye neentsapho zabo imihla ngemihla. Lungiselela kusengaphambili uze udwebe umfanekiso omhle ngoyihlo, umntakwabo okanye utata omkhulu ngoFebhuwari 23 ngamapende okanye ipensela. Eli nqaku elimangalisayo liya kuba yisipho esihle sesipho kunye nomboniso obalaseleyo wekontraki esikolweni nakwilesi.
Indlela yokwenza i-hairstyle yokugcoba ngokukhawuleza: iindlela ezi-3 ezilula!
Ikhadi leposi elihle ngomhla we-9 kaMeyi ngezandla zam
Indlela yokugcoba isakhiwo seNyaka omtsha: Iingcamango eziphezulu ze-4
Indlela yokwazisa ukutya okuncedisayo kwintsana?
Abantu abazalwa ngonyaka we-rat
Indlela yokuba yindoda ibhinqa?
Izambatho zentombi ye shishini
Ibhinqa elifanelekileyo kweli hlabathi lanamhlanje
Isaladi evela kwiklabishi emhlophe